Kambodza: Mbola misalasala momba ny raharaham-pitsarana Khmer Rouge ireo bilaogera taorian’ny fifanarahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2018 4:15 GMT
Araka ny filazan'ny Details are Sketchy, tsy ho ampy mihitsy ny ezaka ataon'ny ECCC amin'ny fanasitranana ny ratra-tsaina mijanona eo amin'ny fiarahamonina Khmer. Ny fitsarana dia tokony ho raisina toy ny hetsika ara-pitsarana fotsiny ihany, fa tsy endrika fitsaboana ara-pihetseham-po ho an'ny niharam-boina.
Goavana ny asa hoavy: midika fananganana lisitry ny lalàna maherin'ny 100 ny fivorian'ny ECCC sy ireo mpitsara iraisam-pirenena sy eo an-toerana, araka ny fanamarihan'i Stan Starygin, bilaogera momba ny fitsarana tamin'ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny Voice of America. Nanome toky ny vahoaka ilay mpitsara Kambodziana You Bunleng fa ny fifanakalozan-kevitra ho avy dia “fifanakalozan-kevitra ara-teknika” fotsiny, saingy mbola misalasala amin'ny hiafaran'izany adihevitra izany ny bilaogera.
Naneho hevitra manohitra ny fanemorana tsy tapaka—angamba taratry ny fiarahan'ny governemanta amin'izao fotoana izao amin'ny fitondrana Khmer Rouge— ilay mpitarika mpanohitra ara-politika, Sam Rainsy, raha nilaza fa ny vahoaka Kambodziana dia mila fitsarana lehibe mba handrosoana. Araka ny filazan'i Rainsy, tsy hanjavona ny aloky ny vono olona tao Kambodza raha mbola eo ambany fahefan'ny CPP.